Ngathi-Inkampani yaseDingzhou Youte yoLungiso lweeNkampani
I-Dingzhou Youte Machinery Manufacturing Co., Ltd. yabhaliswa ngo-2017 kwaye ifumaneka kwisiXeko saseDingzhou, kwiPhondo lase-Hebei, eChina, egubungela ummandla weemitha ezili-10,000. Singumvelisi oqeqeshiweyo woomatshini abasebenza ngocingo. Ukusukela ngo-2008, sithumele kumazwe angama-40 nakwimimandla ehlabathini, kubandakanya iMalaysia, iThailand, iVietnam, iSpain, uMzantsi Afrika, uMntla Afrika, i-Iran, iIndiya, iMorocco, iArgentina, njl.
Ukusukela oko yasekwa, inkampani ibambelele kwifilosofi yeshishini ye "ingqibelelo yokuqala, inkonzo yokuqala", ezinikele kwimveliso kunye nophuhliso locingo loomatshini, kwaye masenze ucingo lwethu loomatshini lubiye kwihlabathi.
Sisebenzisa kuphela ezona zinto zibalaseleyo, siyenza kwaye sivelise iinxalenye zethu, kwaye ekugqibeleni sivelise oomatshini abakumgangatho ophezulu kubathengi bam. Ithuba lemveliso yethu yewaranti yiminyaka emi-2, ukuqala komthengi ekusebenziseni umatshini, ukuba umthengi ufuna amagcisa ethu, siya kuthumela amagcisa ukuba enze imveliso kunye nokulungisa umatshini, ukuqeqesha abasebenzi kunye nezinye iinkonzo.
Sibamkela ngokunyanisekileyo abathengi basekhaya nabangaphandle ukutyelela umzi-mveliso wethu, sikhethe, uya kufumana iingcebiso ezifanelekileyo, ubuchwepheshe obuphambili kunye nomgangatho wenkonzo emva kokuthengisa.
Inkampani iyawuhlonipha umoya wokurhweba "wobulumko, ukusebenza nzima, kunye noxanduva, kwaye idala imeko efanelekileyo yokudibana ngokunyaniseka, ukuphumelela, kunye nefilosofi yeshishini elitsha. Isebenzisa imodeli yolawulo entsha kraca, itekhnoloji egqibeleleyo, inkonzo enolwazelelelo, kunye Obusemagqabini ubunjani njengesiseko sokusinda. Sisoloko sinyanzela abathengi kuqala, sikhonza abathengi ngentliziyo yethu, kwaye sisebenzise inkonzo yethu ukubonakalisa abathengi. Wamkele abathengi abatsha nabadala ukuba batyelele inkampani yethu kwaye bakhokele umsebenzi wethu. iimveliso okanye unayo nayiphi na imibuzo, ungasithumela ngqo Shiya umyalezo okanye unxibelelane nathi ngqo.Ukufumana ulwazi lwakho, siya kulungiselela ixesha lokunxibelelana nawe ngexesha.Sinethemba lokunyaniseka lokusebenzisana nabahlobo abavela kuzo zonke iinkalo zobomi, badibanise izandla Ikamva, kwaye wabelane ngeziphumo eziyimpumelelo! Wamkelekile abahlobo abavela kuzo zonke iindlela zobomi ukuba batyelele, Isikhokelo kunye nothethathethwano lweshishini.